राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई मनोनीत नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत अगाडि वी पी काे धर्ना–Samacharpati
काठमाडौँ, १४ असाेज । नेपाली काँग्रेस (वी पी) ले संविधानको खिलापमा गै राष्ट्रिय सभामा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनीत नगर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालत अगाडि धर्ना दिएको छ ।
उसले संविधानको खिलापमा गै जनअनुमतको अपमुल्याङ्कन गर्न पाईदैन ! जनअनुमत नस्विकार्ने हो भने निर्वाचनमा राज्यको सम्पत्ति किन दुरुपयोग गरियो ! जनअनुमतबाट अस्विकार भएका नेताहरूलाई चोर बाटो प्रयोग गरि संसद मन्त्री बनाउने कार्य बन्द गरियोस !
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठि र बद्री राज भट्टले संवैधानिक पक्षमा दायार गरिएको रिट सुनाईहोस !
संविधान भन्दा बाहिरको निर्णयले गलत नजिर स्थापित हुने सम्माननिय न्यायाधीशहरुमा चेतना भया १ जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्डको प्रयोग गरेको थियो ।